အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးတွေပါ ရနေပြီဖြစ်တဲ့ BFF နဲ့ ခင်မင်မှု တည်မြဲစေမယ့် လမ်းညွှန် (၇) ချက် - For her Myanmar
အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးတွေပါ ရနေပြီဖြစ်တဲ့ BFF နဲ့ ခင်မင်မှု တည်မြဲစေမယ့် လမ်းညွှန် (၇) ချက်
ကိုယ့်ရဲ့BFF တွေက အိမ်ထောင်ကျလို့ ကလေးတောင် ရနေချိန်မှာ ကိုယ်ကတော့ ခုထိ စင်ဂယ်လ်ပဲ ဆိုတဲ့ ယောင်းလေးတွေ ရှိလား?
အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို တွေ့တဲ့အခါ တစ်ခါတလေ ပြောစရာစကားတွေက နည်းပါးသွားသလို ခံစားရတာ အိမွန်တစ်ယောက်တည်းလား သူတို့ကလည်း မိသားစုဘဝတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီဆိုတော့ ဒီမိသားစု အရေးတွေနဲ့ အလုပ်တွေ ရှုပ်ရင်း သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းဆိုတာတောင် ပျောက်လုလုရယ်လေ… သူငယ်ချင်းတွေဘက်က ပြန်ကြည့်တော့လည်း အရင်တုန်းက စကြနောက်ကြ ဆိုပေမဲ့ ဒင်းတို့က အမေနေရာ အဖေနေရာ ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ အသိဝင်သွားတော့ စနောက်ဖို့ တော်တော်လေး စဉ်းစားယူရတာ ထုံးစံပေါ့… မေမေကြီး ဖေဖေကြီးတွေ လုပ်ရင်း ရင့်ကျက်သွားတဲ့ ပုံစံပေါက်နေတော့ ကိုယ်ကပဲ အံမဝင်တော့သလိုလို
ဒါဆို ကလေးရသွားတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ BFF တွေနဲ့ ခင်မင်မှုမပျက်အောင် ဘယ်လို ထိန်းထားမလဲဆိုတာလေး အိမွန်နဲ့ တူတူ ကြည့်ကြရအောင်…
၁။ အရင်ကလို မဟုတ်တောင်မှ အခင်အမင်မပျက်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
BFF နဲ့ ဆက်ပြီး အရင်ကလိုပဲ ခင်နေချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဘက်က အဆက်အသွယ် အမြဲတမ်း လုပ်နေဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ့်အတွက်ကြောင့် တစ်ဖက်သားက ကလေးတစ်ဖက်နဲ့ စိတ်ပျက်သွားလောက်သည်ထိ အလွန်အကျွံတော့ ဒုက္ခမပေးနဲ့ပေါ့နော်။ သတိရတဲ့အခါ ဖုန်းလေးဆက်ပြီး အားတဲ့အချိန်မှာ ခဏတစ်ဖြုတ် အလည်အပတ်သွားတာမျိုးလေးတွေ လုပ်ပေးရင်တော့ အခင်အမင်မြဲမှာပါ။
၂။ ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတာကို လက်ခံပါ။
အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းက ကလေးအမေဖြစ်သွားလို့မို့ မတွဲဖြစ်တော့ဘူး ဆိုတာမျိုး မလုပ်ပါနဲ့နော် ယောင်းရေ။ သူ့ဘဝနဲ့သူ ဆိုပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကိုတော့ အဆုံးရှုံး မခံလိုက်ပါနဲ့။ သူက အပြောင်းအလဲတစ်ခုထဲမှာ ကျင်လည်နေပြီဆိုရင် သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါတိုင်း ကိုယ်လည်း ရေလိုက်ငါးလိုက်လေး နေသွားရင်၊ နားလည်ပေးလိုက်နိုင်ရင် ဒီသံယောဇဉ်တွေ မပျက်တော့ဘူးပေါ့..
Related Article >>> အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းရဲ့ သစ္စာဖောက်ခြင်း ခံရတဲ့အခါ ဘယ်လိုမျိုး တုံ့ပြန်မလဲ?
၃။ သူ့ဘက်ကနေ ဖြည့်တွေးပေးပါ။
တစ်ခါတလေ ဘယ်လောက်ပဲ သူငယ်ချင်းအပေါ်မှာ နားလည်တယ်ပြောပြော ကိုယ်စိတ်နဲ့ သဘောမတွေ့ချိန်မှာတော့ ငြိုငြင်ကြတာ ချည်းပါပဲ။ ကိုယ်က ချိန်းထားတယ် သူက အိမ်အလုပ်တွေနဲ့ မအားလို့ နောက်ကျနေတာမျိုးမှာ သူ့ကိုသွားပြီး ငြူစူနေမယ့်အစား သူ့အိမ်ကိုသွားပြီး အလုပ်တွေ မြန်မြန်ပြီးအောင် တစ်တပ်တစ်အား ဝိုင်းကူပေးတာမျိုးက သူ့အတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။ သူငယ်ချင်းက အိမ်မှုကိစ္စတွေနဲ့ အလုပ်တွေရှုပ်နေချိန် ကိုယ်က ကလေးဝင်ထိန်းပေးလိုက်တာမျိုးဆိုရင်တော့ ကိုယ်က ကယ်တင်ရှင်ကြီးပေါ့..
၄။ အတင်းကြီး ဖိအားမပေးပါနဲ့။
ကလေးအမေတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် အရင်တုန်းကလို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျော်ပါးချိန်ဆိုတာ ရှားသွားပါပြီ။ ဒါကို လက်ခံထားမယ်ဆိုရင် သူက ငါတို့ကို ဦးစားမပေးဘူး ဘာညာ ဒေါသထွက်နေမယ့်အစား နားလည်မှု ပေးနိုင်သွားပြီပေါ့.. ဒါဆိုရင်တော့ စိတ်ကွက်တာ၊ ငြိုငြင်တာတွေ ဖြစ်လာတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
၅။ မိခင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ မိသားစုက ပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ နားလည်ပေးပါ။
ကိုယ်ခင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့ bff ကြီးက သူ့ကလေးနဲ့မိသားစုအတွက်ပဲ အမြဲတမ်း အချိန်ပေးချင်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လေ.. ကလေးရသွားတော့ ငါ့ကို သူက အာရုံထဲတောင် ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ကလေးနဲ့ အပြိုင် J ဝင်တာမျိုး ဖြစ်ဖူးလား? ကိုယ်တကယ် အိမ်ထောင်ကျသွားမှ married life (အိမ်ထောင်ရှင်ဘဝ) နဲ့ single life (တစ်ကိုယ်တည်းဘဝ) ရဲ့ ကွာဟချက်ကို ကိုယ်ချင်းစာနိုင်မှာလေနော်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ကို အရေးမပေးတာကို မကျေနပ်ဘူးဆိုလည်း သူ့ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြညှိနှိုင်းပြီး နည်းလမ်း ရှာသင့်ပါတယ်နော်…
Related Article >>> ဘယ်အရွယ်ရောက်ရောက် မိတ်ဆွေမရှားစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းများ
၆။ ရင်ဖွင့်ခံစားချက်တွေကို နားထောင် အကြံပေးပါ။
အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့ သူငယ်ချင်းမှာလည်း သူ့ခံစားချက် အလုံးစုံကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလို့ရမယ့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်တော့ လိုအပ်သေးတာပါပဲ။ တကယ်လို့ ကိုယ်က bff စစ်မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ သူရင်ဖွင့်သမျှတွေကို သေချာနားထောင်ပြီး အကြံကောင်းတွေ ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
၇။ bff ရဲ့ကလေးကို ကိုယ့်ကလေးလို သဘောထားပါ။
ဘယ်သူမဆို ကိုယ့်ရင်သွေးကို ဂရုစိုက်ချစ်ပေးတဲ့သူကို ခင်မင်တာ ထုံးစံပါပဲ။ အဲဒီသူက BFF ဖြစ်နေခဲ့ရင် ပိုလို့တောင် ဝမ်းသာဦးမှာပါ။ ဒီတော့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းရဲ့ ကလေးအတွက် လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေ ဝယ်ပေးပြီး ဂရုတစိုက် ရှိပေးတာက BFF ကို ချစ်တာနဲ့ တူတူပဲပေါ့ ယောင်းရေ။
ဒီအချက်လေးတွေကို သိထားရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ BFF ကြီးနဲ့ အခင်အမင် ပျက်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့…
References: Hello Giggles, Verilymag
ကိုယျ့ရဲ့BFF တှကေ အိမျထောငျကလြို့ ကလေးတောငျ ရနခြေိနျမှာ ကိုယျကတော့ ခုထိ စငျဂယျလျပဲ ဆိုတဲ့ ယောငျးလေးတှေ ရှိလား?
အိမျထောငျကသြှားတဲ့ သူငယျခငျြးတှကေို တှတေဲ့အခါ တဈခါတလေ ပွောစရာစကားတှကေ နညျးပါးသှားသလို ခံစားရတာ အိမှနျတဈယောကျတညျးလား သူတို့ကလညျး မိသားစုဘဝတဈခုကို ပိုငျဆိုငျထားပွီဆိုတော့ ဒီမိသားစု အရေးတှနေဲ့ အလုပျတှေ ရှုပျရငျး သူငယျခငျြး အပေါငျးအသငျးဆိုတာတောငျ ပြောကျလုလုရယျလေ… သူငယျခငျြးတှဘေကျက ပွနျကွညျ့တော့လညျး အရငျတုနျးက စကွနောကျကွ ဆိုပမေဲ့ ဒငျးတို့က အမနေရော အဖနေရော ရောကျသှားပွီဆိုတဲ့ အသိဝငျသှားတော့ စနောကျဖို့ တျောတျောလေး စဉျးစားယူရတာ ထုံးစံပေါ့… မမေကွေီး ဖဖေကွေီးတှေ လုပျရငျး ရငျ့ကကျြသှားတဲ့ ပုံစံပေါကျနတေော့ ကိုယျကပဲ အံမဝငျတော့သလိုလို
ဒါဆို ကလေးရသှားတဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ BFF တှနေဲ့ ခငျမငျမှုမပကျြအောငျ ဘယျလို ထိနျးထားမလဲဆိုတာလေး အိမှနျနဲ့ တူတူ ကွညျ့ကွရအောငျ…
၁။ အရငျကလို မဟုတျတောငျမှ အခငျအမငျမပကျြဖို့ ကွိုးစားပါ။
BFF နဲ့ ဆကျပွီး အရငျကလိုပဲ ခငျနခေငျြသေးတယျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ဘကျက အဆကျအသှယျ အမွဲတမျး လုပျနဖေို့ လိုပါတယျ။ ကိုယျ့အတှကျကွောငျ့ တဈဖကျသားက ကလေးတဈဖကျနဲ့ စိတျပကျြသှားလောကျသညျထိ အလှနျအကြှံတော့ ဒုက်ခမပေးနဲ့ပေါ့နျော။ သတိရတဲ့အခါ ဖုနျးလေးဆကျပွီး အားတဲ့အခြိနျမှာ ခဏတဈဖွုတျ အလညျအပတျသှားတာမြိုးလေးတှေ လုပျပေးရငျတော့ အခငျအမငျမွဲမှာပါ။
၂။ ပွောငျးလဲသှားပွီဆိုတာကို လကျခံပါ။
အခငျဆုံးသူငယျခငျြးက ကလေးအမဖွေဈသှားလို့မို့ မတှဲဖွဈတော့ဘူး ဆိုတာမြိုး မလုပျပါနဲ့နျော ယောငျးရေ။ သူ့ဘဝနဲ့သူ ဆိုပမေဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ အခငျဆုံးသူငယျခငျြး တဈယောကျကိုတော့ အဆုံးရှုံး မခံလိုကျပါနဲ့။ သူက အပွောငျးအလဲတဈခုထဲမှာ ကငျြလညျနပွေီဆိုရငျ သူနဲ့တှတေဲ့အခါတိုငျး ကိုယျလညျး ရလေိုကျငါးလိုကျလေး နသှေားရငျ၊ နားလညျပေးလိုကျနိုငျရငျ ဒီသံယောဇဉျတှေ မပကျြတော့ဘူးပေါ့..
Related Article >>> အရငျးနှီးဆုံး သူငယျခငျြးရဲ့ သစ်စာဖောကျခွငျး ခံရတဲ့အခါ ဘယျလိုမြိုး တုံ့ပွနျမလဲ?
၃။ သူ့ဘကျကနေ ဖွညျ့တှေးပေးပါ။
တဈခါတလေ ဘယျလောကျပဲ သူငယျခငျြးအပျေါမှာ နားလညျတယျပွောပွော ကိုယျစိတျနဲ့ သဘောမတှခြေိ့နျမှာတော့ ငွိုငွငျကွတာ ခညျြးပါပဲ။ ကိုယျက ခြိနျးထားတယျ သူက အိမျအလုပျတှနေဲ့ မအားလို့ နောကျကနြတောမြိုးမှာ သူ့ကိုသှားပွီး ငွူစူနမေယျ့အစား သူ့အိမျကိုသှားပွီး အလုပျတှေ မွနျမွနျပွီးအောငျ တဈတပျတဈအား ဝိုငျးကူပေးတာမြိုးက သူ့အတှကျလညျး အထောကျအကူဖွဈမှာပါ။ သူငယျခငျြးက အိမျမှုကိစ်စတှနေဲ့ အလုပျတှရှေုပျနခြေိနျ ကိုယျက ကလေးဝငျထိနျးပေးလိုကျတာမြိုးဆိုရငျတော့ ကိုယျက ကယျတငျရှငျကွီးပေါ့..
၄။ အတငျးကွီး ဖိအားမပေးပါနဲ့။
ကလေးအမတေဈယောကျဖွဈသှားပွီဆိုရငျ အရငျတုနျးကလို သူငယျခငျြးတှနေဲ့ လှတျလှတျလပျလပျ ပြျောပါးခြိနျဆိုတာ ရှားသှားပါပွီ။ ဒါကို လကျခံထားမယျဆိုရငျ သူက ငါတို့ကို ဦးစားမပေးဘူး ဘာညာ ဒေါသထှကျနမေယျ့အစား နားလညျမှု ပေးနိုငျသှားပွီပေါ့.. ဒါဆိုရငျတော့ စိတျကှကျတာ၊ ငွိုငွငျတာတှေ ဖွဈလာတော့မှာ မဟုတျပါဘူး။
၅။ မိခငျဖွဈသှားပွီဆိုတော့ မိသားစုက ပိုအရေးကွီးတယျဆိုတာ နားလညျပေးပါ။
ကိုယျခငျရပါတယျဆိုတဲ့ bff ကွီးက သူ့ကလေးနဲ့မိသားစုအတှကျပဲ အမွဲတမျး အခြိနျပေးခငျြတယျဆိုတာ ဖွဈသငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လေ.. ကလေးရသှားတော့ ငါ့ကို သူက အာရုံထဲတောငျ ရှိတော့မှာ မဟုတျဘူးဆိုပွီး ကလေးနဲ့ အပွိုငျ J ဝငျတာမြိုး ဖွဈဖူးလား? ကိုယျတကယျ အိမျထောငျကသြှားမှ married life (အိမျထောငျရှငျဘဝ) နဲ့ single life (တဈကိုယျတညျးဘဝ) ရဲ့ ကှာဟခကျြကို ကိုယျခငျြးစာနိုငျမှာလနေျော။ တကယျလို့ ကိုယျ့ကို အရေးမပေးတာကို မကနြေပျဘူးဆိုလညျး သူ့ကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ပွောပွညှိနှိုငျးပွီး နညျးလမျး ရှာသငျ့ပါတယျနျော…
Related Article >>> ဘယျအရှယျရောကျရောကျ မိတျဆှမေရှားစမေယျ့ နညျးလမျးကောငျးမြား
၆။ ရငျဖှငျ့ခံစားခကျြတှကေို နားထောငျ အကွံပေးပါ။
အိမျထောငျကသြှားတဲ့ သူငယျခငျြးမှာလညျး သူ့ခံစားခကျြ အလုံးစုံကို ရငျဖှငျ့ပွောပွလို့ရမယျ့ မိတျဆှတေဈယောကျတော့ လိုအပျသေးတာပါပဲ။ တကယျလို့ ကိုယျက bff စဈမှနျတယျဆိုရငျတော့ သူရငျဖှငျ့သမြှတှကေို သခြောနားထောငျပွီး အကွံကောငျးတှေ ပေးလိုကျရုံပါပဲ။
၇။ bff ရဲ့ကလေးကို ကိုယျ့ကလေးလို သဘောထားပါ။
ဘယျသူမဆို ကိုယျ့ရငျသှေးကို ဂရုစိုကျခဈြပေးတဲ့သူကို ခငျမငျတာ ထုံးစံပါပဲ။ အဲဒီသူက BFF ဖွဈနခေဲ့ရငျ ပိုလို့တောငျ ဝမျးသာဦးမှာပါ။ ဒီတော့ ကိုယျ့သူငယျခငျြးရဲ့ ကလေးအတှကျ လကျဆောငျပစ်စညျးလေးတှေ ဝယျပေးပွီး ဂရုတစိုကျ ရှိပေးတာက BFF ကို ခဈြတာနဲ့ တူတူပဲပေါ့ ယောငျးရေ။
ဒီအခကျြလေးတှကေို သိထားရငျတော့ ကိုယျ့ရဲ့ BFF ကွီးနဲ့ အခငျအမငျ ပကျြစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့…
Tags: baby, bff, Friendship, have, maintain, ways
Ei Mon November 19, 2018